Haweeney Shan nin oo walaalo ah qabaan !!!! - iftineducation.com
Haweeney Shan nin oo walaalo ah qabaan !!!!
Wargeyskaily Mail ee kaso baxa wadanka Ingiriiska oo wax ka qoray sheekada gabadhaan ayaa sheegay in gabadhu ay ku nooshahay tuulo yar oo la yiraahdo Dehradun, kuna taala waqooyiga wadanka Hindiya.
Ninkii ugu horeeyay ee guursada waxaa la yiraahdaa Guddu 4 sano ka hor ayuu guursaday kadib markii uu cideeda ka doontay hase dib ayay ka guursaday 4 wiil oo kale oo la dhalatay oo lakala yiraahdo Sant Ram, Gopal,iyo Dinesh oo ah kan ugu dambeeyay waxaana uu guursaday sanad ka hor.
“Dhamaanteen xaas bay noo tahay waana u wada galmoonaawaliba anigu kama maseyro waxaanu nahay qoys wada faraxsan” waxaa sidaas yiri Gaddu oo ah ninkii ugu horeeyay ee gursaday haweeneydaan”
“Cuntada hal meel ayaanu kuwada karsanaa waana isku qanacsanahay” ayuu sidoo kale yiri
Haweeneydaan waxaa ay sheegtay inaysan wax culays ah u arkeyn inay qabaan shan nin oo walaalo ah sababtuna ay tahay in hooyadeed ay hadda ka hor ay qabi jireen 3 nin oo walaalo ah.
Waxaa kale oo ay tiri “ Hal meel ayaanu wada seexanaa mana haysano wax sariiro ah oo bustayaal ayaanu wada huwaana” waxaana ay intaa ku dartay in 5,taan nine ee qaba ay aad u jecelyihiin
“ Waxaan dareemaa jaceyl ka badan kuwa ay helaan dumarka uu halka nin qabo” ayey sidoo kalew tiri.
Aabaha dhalay haweeneydaan oo la yiraahdo Verma Draupadi ayaa u sheegay wargeyska la yiraahdo The Sun oo sidoo kale sheekadaan wax ka qoray inuu aad uga naxay markii uu muqlay in gabadhiisa ay shan nin u dhaxday.
Dalka Hindiya dadka aan Muslimka aheyn dhaqan ahaan uma laha in qofka dumarka ah uu guursado wax ka badan hal nin arintaana dad badan ayay ka yaabisay.
4 waxyaalood biyaha nink dib udhigaya